Maka: ukugcinwa kwabathengi | Martech Zone
Maka: ukugcinwa kwabathengi
Kutheni wena kunye noMthengi wakho kufuneka niziphathe njengesibini esitshatileyo ngo-2022
NgoLwesibini, Februwari 8, 2022 NgoLwesibini, Februwari 8, 2022 Gregg Ames
Ukugcinwa kwabathengi kulungile kwishishini. Ukukhulisa abathengi yinkqubo elula kunokutsala abatsha, kwaye abathengi abonelisekileyo banokuphinda bathenge. Ukugcina ubudlelwane obuluqilima babathengi akuncedi kuphela eyona njongo yombutho wakho, kodwa ikwagatya ezinye iziphumo ezivakala kwimimiselo emitsha yokuqokelelwa kwedatha efana nokuvalwa okuzayo kukaGoogle kwiikuki zomntu wesithathu. Ukunyuka kwe-5% ekugcinweni kwabathengi kuhambelana nobuncinci be-25% yokunyuka
NgoLwesibini, Oktobha 26, 2021 NgoLwesibini, Oktobha 26, 2021 uRubhen uYonatan
Xa usaqala ishishini, kuyahenda ukutsala abathengi ngayo nayiphi na indlela onokuthi ngayo, nokuba lithini na ixabiso, ixesha, okanye amandla abandakanyekayo. Nangona kunjalo, njengoko ufunda kwaye ukhula uya kuqonda ukuba ukulungelelanisa ixabiso elipheleleyo lokufunyanwa kwabathengi kunye ne-ROI kubalulekile. Ukwenza oko, kuya kufuneka wazi ixabiso lokufunyanwa komthengi wakho (CAC). Uzibala njani iindleko zokuFumana koMthengi Ukubala i-CAC, kufuneka nje wahlule zonke iintengiso kunye